हाम्रो सन्दर्भमा संविधान संशोधनको आवश्यक्ता र औचित्य त्यतिबेला नै थियो, जतिबेला हामीले संविधानमा हस्ताक्षर गरेनौं । संविधान संशोधन नचाहने, मधेशी जनतालाई अधिकार दिन नचाहने, पहिचान विरोधी, संघीयतालाई कमजोर बनाउन चाहनेहरू राजनीतिक पार्र्टी र नेताहरूको भनाई हो औचित्य र आवश्यकक्ताको आधारमा संविधान संशोधन हुन्छ । यो त एउटा षड्यन्त्रकारी भाषा हो ।
हामीले ल्याएका वस्तु विश्वासका साथ प्रयोग गर्ने उपभोक्तलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि गुणस्तरीय सामानहरू नै खरिद गरौं र स्वस्थ रहौं भन्न चाहन्छु ।
सिंहदरबार गाउँ गाउँमा भन्ने नाराभन्दा कामहरूबाट जनताले महसुस गरेका छन् । तर, जुन किसिमले हामी जनतालाई सुख सुविधा दिनुपर्ने हो, त्यो दिन सकिरहेका छैनौं ।
हामीले जुन आशा र विश्वासका साथ समर्थन गरेका छौं, त्यसका लागि तुरून्तै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । केही दिन पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
हामीले कुनै नयाँ कर लगाएका छैनौं : श्रवण कुमार यादव
हामीले कुनै किसिमको नयाँ वा जनतालाई भार पर्ने कर लगाएका छैनौं । जतिबेला मिर्चैया नगरपालिका घोषणा भयो, त्यो बेला करको जुन दायरा थियो त्यसैअनुसार अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, यहाँ जनतालाई भ्रममा पार्न विभिन्न किसिमका कुरा गरिँदैछ ।
नेपाल—भारतको सम्बन्ध जति प्रगाढ छ, त्यसलाई अझ सुमधुर बनाउने हाम्रो प्रयास हो । विगतमा भएका सन्धी–सम्झौता, व्यापार, जलविद्युत्लगायत अन्य विभिन्न विषयहरू यो प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
मधेशमा अहिले तीनवटा पक्ष देखिएका छन् । एउटा पक्ष छ, जो तराई मधेशलाई अलग राष्ट्र बनाउन लागेको छ । दोस्रो पक्ष फोरम नेपाल हो जो सरकारमै सम्मिलित छ । उसले सत्तापक्षको धर्म निर्वाह गर्दै आएको छ । तर, तेस्रो पक्ष राजपा नेपाल हो जो संघीय संसदमा तेस्रो ठूलो पार्टीको रूपमा स्थापित छ । त्यसैले राजपाले मधेशभरिका सबै शहीद परिवारहरू र घाइतेहरूको एउटा अभिलेख बनाएर नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ ।
करभन्दा विकास बढी प्राथमिकतामा : हरिप्रसाद मण्डल मेयर
समस्या र चुनौती त छँदैछ । किनभने ग्रामीण भेगलाई एकैचोटि कहीं नगरपालिका र गाउँपालिका बनाइयो । विगतका चार–पाँच वटा गाउँ विकास समितिहरूलाई जोडेर नगरपालिका बनाइएको हो ।
हाम्रो वैकिल्पक बाटो दुईटा हुन सक्छ । कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने अथवा नयाँ दल दर्ता गरेर राजनीतिक यात्रा सुरू गर्ने । हामी साथीहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं । जिल्ला–जिल्लामा पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरूसँग सरसल्लाह भइरहेको छ ।
राजपा नेपालको प्रदेश नम्बर २ को संसदीय दलको भूमिका त्यो दिन निकै दुःखदायी रह्यो । संसदीय दलका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रदेशमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनलको भूमिका पनि दुःखलाग्दो रह्यो । समयमा ठोस निर्णय लिन नसक्नेलाई कसरी नेता भन्ने ?
विकासमा कांग्रेसको अवरोध छ : अभय कुमार सिंह मेयर
कांग्रेसका सांसद डा. अमरेश सिंहको डरले कर्मचारी त्यहाँ बस्दैन । उहाँका भाई भतिजाहरूले यति धेरै धाक धम्की दिन्छन् कि कर्मचारी खेप्नै सक्दैनन् ।